“Riyadii ku guuleysiga horyaalka Premier League way luntay, laakiin!.” – Sadio Mané – Gool FM
Dajiye February 24, 2021
(Liverpool) 24 Feb 2021. Xiddiga kooxda kubadda cagta Liverpool ee Sadio Mané, ayaa qirtay inay luntay riyadii ay ugu guuleysan lahaayeen horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, isagoo muujiyay in ujeedka ugu weyn ee Reds uu yahay ku guuleysiga koobka Champions League.
Kooxda Liverpool ayaa mareysa xilli hoos u dhac weyn uu ku yimid qaab ciyaareedkeeda, gaar ahaan horyaalka Premier League, maadaama ay haatan ku jiraan kaalinta lixaad iyagoo leh 40 dhibcood.
Liverpool ayaa la kulantay guuldarro afar kulan ah oo isku xigta Premier League, taasoo Reds ka dhigtay inay lumiso fursad ay ku difaacan laheyd horyaalka, maadaama farqiga u dhexeeya iyaga iyo hoggaamiyaasha Manchester City uu noqday 19 dhibcood.
Sida laga soo xigtay shabakada “ESPN” Sadio Mané ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu ku sheegay:
“Ciyaaryahan kasta oo Liverpool ah wuxuu leeyahay ujeedooyin uu doonayo inuu gaaro xilli ciyaareedkan, sidoo kale kooxda.”
“Ujeedkeena tan iyo bilawgii wuxuu ahaa inaan ku guuleysano Champions League, Premier League, laakiin hada waxaan dhihi karaa way dhamaatay tartankii horyaalka.”
“Marnaba ma quusan doonno, mana quusan doonno, laakiin xaqiiqdii Manchester City waa koox fiican, waana hogaamiyeyaal leh kala duwanaansho raaxo leh, marka ujeedka waa inaan xilli ciyaareedka ku dhammeysano afarta boos ee ugu horreysa horyaalka, iyo sidoo kale inaan ku guuleysano tartanka Champions League.”